ब्लगबिहिवार, भाद्र १५, २०७४
यो उपत्यका भित्र र बाहिरका भरिया, बटुवा, व्यापारी र यात्रुले आश्रय लिने थलो थियो, दक्षिण–उत्तर व्यापार मार्गको दोबाटोमा । छेवैमा पानीको स्रोत (आजको मरुहिटी) भएकाले पनि यात्रुहरुको लागि यो स्थान पायक पर्न गयो । पछि काष्ठमण्डपलाई केन्द्रविन्दु बनाउँदै, दक्षिणतर्फको यङ्गल र उत्तरतर्फको यंवु जोडिंदै गएर काष्ठमण्डप 'सिटीस्टेट' उत्पन्न भयो– हाम्रो काठमाण्डू ।
मेरी स्लसरले (स्व.) शुक्रसागर श्रेष्ठ, काशीनाथ टमोट जस्ता पुरातात्विक विद्वान् तथा नेपालमा चासो राख्ने पश्चिमा विज्ञहरूसँग ६ दशकसम्म सम्पर्कमा बसेर उपत्यकाबारे शोध, लेखन र प्रकाशन गरिन् । सन् १९८२ मा 'नेपालमण्डल' कृति दुई भोलुममा निकालिन् । र त्यसअघि विज्ञ गौतमवज्र बज्राचार्यसँग मिलेर काष्ठमण्डपकै कृति प्रकाशित भएको थियो सन् १९७४ मा ।
२०७२ वैशाखमा भुईंचालो गएपश्चात् उनले एक मित्रलाई लेखिन्– 'कस्तो विडम्बना ! सबैको ध्यान दरबार स्क्वायरहरूमा छ, जबकि नेपालको सबभन्दा महत्वपूर्ण इमारत त काष्ठमण्डप हो ।'
धरहराले नेपालवासीलाई राजधानी उपत्यका चिनायो । सिंहदरबारको 'फसाड' ले जनतालाई नेपाल राज्य जनायो । काष्ठमण्डपले ऐतिहासिक कालसँग वर्तमानलाई बाँध्यो, नेपालीजनमा राजकीय वा विभेदकारी नभई सांस्कृतिक निरन्तरताको सन्देश दियो । जसरी सुमेरु पर्वत ब्रह्माण्डको केन्द्रविन्दु मानिन्थ्यो, त्यसैगरी काष्ठमण्डप, नेपालमण्डल काठमाडौं उपत्यकाको मुटु बन्न पुग्यो ।
“तीनवटा ताम्रपत्र फेला परेका छन्”, काशीनाथ टमोट भन्छन् । ठाउँठाउँमा भाँचिए पनि त्यो 'फ्रीज्' स्व. शुक्रसागर श्रेष्ठले एक वर्षअघि हनुमानढोका परिसरमा फेला पारे । मेरी स्लसरले फ्रीज्को खबर एक वर्षअघि पाएपछि पृथ्वी पारिपट्टि एक्लै खुशी भइन् र टमोटलाई लेखिन्, “मलाई त सेप्टेम्बरमै क्रिसमस आएजस्तो भयो !”
काष्ठमण्डप कुनै राजारजौटा अथवा भगवानको थलो होइन, आदिकालदेखि नै यो आमजनताको आफ्नो थियो । यसै कारण 'गणतन्त्र नेपाल' ले त यस सत्तलको महत्व झनै बुझ्नुपर्ने थियो । जनताकै थलो भएकै कारण भूकम्प गएको समयमा यहाँ नागरिकहरू भेला भएका थिए, रक्तदानको पवित्र कार्यमा जुटेका थिए । भवन ढल्दा १० जना टोलवासीको ज्यान गयो । दिवंगतहरूलाई समेत सम्झेर आजको असहज खिचातानी अन्त्य गर्दै मरुसत्तलको पुनःनिर्माणमा सबै लाग्नुपर्‍यो ।
इतिहास र ऐतिहासिकता बेगर 'नेपालमण्डल' खोक्रो, निर्जीव 'काठमाडौं' हुन्छ । यसको 'सबाल्टर्न' इतिहासले जनमानसको कथा–व्यथा बोल्छ । यस्तो विगत बोकेको सम्पदाको पुनःनिर्माणमा थप ढिलो नगरौं ।